टिप्स | Automotive News Nepal
यसो गर्नुस् गर्मी याममा कारको एसी बचाउन
गर्मी मौसममा कार भित्र गुम्सेर यात्रा गर्न सहज हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा जहाँ धुवाँ धुलोले गर्दा कारको झ्याल खोलेर यात्रा गर्न सहज बनाएको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा कारमा भएको एयरकन्डिसन (एसी) को प्रयोग गर्नु राम्रो विकल्प हो । तर एसीको सही तरिकाले प्र...
बाइक चलाउदा पालना गरौ यी १३ नियम, दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ
बढ्दो सहरीकरण र व्यस्त जीवनशैलीको कारणले यात्रा गर्न वा कही जानको लागि मोटरसाइकलको प्रयोग महत्वपूर्ण साधन भएको छ । शहर होस् या ग्रामीण क्षेत्र, हरेक क्षेत्रमा युवावर्गहरूमा बाइकको क्रेज बढ्दो छ । नेपाली बजारमा अहिले नयाँ नयाँ मोटरसाइकलहरु आयात भइरहेक...
पहिलो चोटी कार चलाउन सिक्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
जीवनमा एउटा कार किन्ने सपना सबैको हुन्छ । कार चलाउन कसलाई पो मन पर्दैन र ? तर नयाँ कार किन्ने क्षमता हामी सबैमा हुँदैन र हामी सेकेन्ड ह्यान्ड कार किनेर भएपनि आफ्नो कार चलाउने सोख पुरा गर्छौ । यदि तपाई पहिलो चोटि कार चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने कार चला...
होली उमंगको पर्व हो । नेपालको पहाडी भागमा फागुन १७ गते बिहीबार र तराईमा फागुन १८ गते होली मनाइदै छ । तर होली खेल्दा आफ्नो शरीरका साथै शीरको सुरक्षा गर्नु पनि आवश्यक पर्छ । खासगरी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्नका लागि मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेहरु धेरै छ...
मोटरसाइकलबाट पनि स्मार्टफोन चार्ज गर्न सकिने भएको छ । त्यसका लागि मोटरसाइकलमा चार्जर फिट गर्न आवश्यक हुन्छ । घरमा आफैँ पनि सजिलै तरिकाले यस्तो चार्जर फिट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मोटरसाइकलको ब्याट्रीसँग डाइरेक्ट कनेक्ट हुने चार्जरको आवश्यकता ह...
गाडी खरिद गर्नु जति महत्वपूर्ण कुरा हो, त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन आउँछ त्यसको सुरक्षा । उपयुक्त सुरक्षाले मात्र गाडी लामो समयसम्म टिक्छ । नत्र, गाडीमा गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन्छ । जाडोमा यसरी गाडीको सुरक्षा गर्न सकिन्छ : सामान्यतया...
इन्जिन सिज भनेको के हो ? सिज हुनबाट कसरी बचाउने ?
गाडीको इन्जिन सिज भएको हामीले सुनेका वा भोगेका छौ । आखिर के हो त इन्जिन सिज भनेको ? इन्जिन लक हुनु वा यो चल्न बन्द गर्नु नै इन्जिन सिज हुनु हो । लापरवाहीका कारण पुरानो मात्र होइन, नयाँ गाडीको इन्जिन पनि सिज हुन सक्छ । निम्न कारणले इन्जिन सिज हुन्छ :...
जाडो मौसममा मोटरसाइकल राइडिङ : टिप्स
मोटरसाइकल चालकहरुका लागि जाडो याम निकै चुनौतीपुर्ण हुन्छ । जाडोको समयमा त्यत्तिकै पनि निकै चिसो हुन्छ, अझ चिसो हावामा मोटरसाइकलमा सवार हुदा स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । यसले गर्दा विरामी हुने सम्भावना पनि हुन्छ । तर पनि मोटरसाइकल चढ्नु न...
मध्यम वर्गीय परिवारको वृद्धिसँगै नेपालमा गाडी खरिदको संख्या पनि अत्यधिक बढ्दो छ । कुनै समय विलासिताको रूपमा हेरिने गाडीलाई पछिल्लो एक दशकदेखि आवश्यकताको रूपमा लिन थालिएको छ । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, विश्वमा चर्चित प्रायः गाडी कम्पनी नेपालमा भित्रिसकेका...
हड्डी खिइन्छ, मोटरसाइकल राइड गर्दा यसरी सचेत हुनुस्
लामो समय ड्राइभिङ गर्दा बढी तनाव हुन सक्छ । यसरी लामो समय ड्राइभ गर्दा मेरुदण्डकोे जोर्नीमा अत्यधिक बल पर्न गई बिस्तारै खिइन थाल्नुका साथै मेरुदण्डको लिगामेन्ट र मासु च्यापिनेजस्ता समस्यासमेत देखिन थाल्छ । लामो समय मोटरसाइकल हाँक्दा गर्दन, कम्मर दुख्...
लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन कसरी दिने ?
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि अनलाइन आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागको (डब्लु डब्लु डब्लु डट डिओटिएम डट जीओभी डट एनपी) वेबसाइट खोल्नुपर्छ । वेबसाइटको होम पेज खुल्छ । आवेदकले होम पेजमा यातायात व्यवस्था विभागको चिनारी मुनी रहेको ‘सवार...
यसरी राखौ कारलाई चुस्त
हामी आफ्नो शरीरलाई चुस्त, स्फुर्ति र तन्दुरुस्त राख्नका लागि नियमित व्यायाम गर्छौ । खानपानमा ध्यान दिन्छौ । स्वास्थ्य परीक्षण गराउछौ । तर, हामीले प्रयोग गरिरहेको सामग्रीलाई कसरी सुरक्षित राख्दै लामो समयसम्म टिकाउने ? यस सम्वन्धमा खासै ख्याल गर्दैनौ ।...
बाइक सफा गर्दा अपनाऔं यी ६ टिप्स
दुईपांग्रे सवारी साधन सफा गर्नु कतिपय मानिसलाई सामान्य कुरा लाग्न सक्छ तर सही तरिकाले सफा नगरिएमा बिस्तारै सवारी साधनको रङ र चमक हराउन पनि बेर लाग्दैन । चारपांग्रेको तुलनामा दुईपांग्रे सवारी साधनमा बढी कुनाकाप्चा हुने र केबुल, इन्जिन, गियरबक्स बाहिरै...